सेतो पानी बग्ने समस्याः डाक्टरका टिप्स र भान्छाकै औषधीले गायब हुनसक्छ ! « Lokpath
२०७६, १३ भाद्र शुक्रबार १४:४६
सेतो पानी बग्ने समस्याः डाक्टरका टिप्स र भान्छाकै औषधीले गायब हुनसक्छ !
प्रकाशित मिति : २०७६, १३ भाद्र शुक्रबार १४:४६
तपाईलाई सेतो पानी बग्ने समस्या छ ? उमेर पुगेका यूवतीहरुमा कहिलेकाहि यौनांगबाट सेतो पानी आउनु सामान्य नै हो । तर नेपालका ग्रामीण भेगहरुमा अझ शहरमा पनि लाज, धक, डर र संकोच मानेर अत्याधिक मात्रामा सेतो पानी बग्दा पनि लाुकाउने चलन छ । तपाईलाई अत्याधिक सेतो पानी बग्छ भने त्यो समस्या हो । यौवनावस्थामा, महिनावारीको मध्य भागतिर (डिम्ब निस्किने बेला), महिनावारी हुनु ठिक्क अगाडि स्त्री जनेन्द्रियमा रगतको बहाव बढ्नाले सेतो पानी बढी बग्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
धेरै यूवतिहरु योनीबाट गन्हाउने सेतो पानी बगेको समस्यालाई खासै खुलेर भन्न सक्दैनन् । परिणाम भयावह अवस्था सामाना गर्नुपर्छ । चिकित्सक भन्छन्, यस्ता समस्याको उपचार खोज्नूपर्छ लुकाएर संकोच मानेर हुँदैन ।
योनीबाट पानी जस्तो तर चिप्लो वा बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा पातलो सिँगानजस्तो लामो तन्किने खालको पानी बग्यो भने त्यसलाई सामान्य लिनुपर्छ । यो सामान्य प्राकृतिक चक्र हो। यस्तोखाले पानी गन्हाउँदैन। यो पानी सेतो हुन्छ। योनी चिलाउँदैन। शारीरिक सम्बन्धको चाह हुँदा पानीको मात्रा धेरै बग्न सक्छ। सम्पर्क हुने समय अझै धेरै पानी बग्न सक्छ। यो बेला पनि आत्निुपर्दैन ।
तर, जब योनीबाट अस्वभाविक रुपमा धेरै पानी बग्छ, थाम्नै नसक्नेगरी पानी आईरहन्छ । त्यो गन्हाउने किसिमको छ, योनी चिलाउने र दुख्ने हुन्छ र प्रयोग गरेको पेन्टी एक घण्टामा नै भिजिहाल्छ भने सकेसम्म उपचारको विधी खोज्नूपर्छ ।
-महिनावारीको समयमा बेलाबेलामा प्याड वा कपडा फेर्ने गर्नुपर्छ ।
– एक दिन प्रयोग गरेको पेन्टी अर्को दिन सफा नगरी प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
– सुती कपडाले बनेका भित्री पहिरनको प्रयोग गर्नुपर्छ।
-महिनावारीको समय निकै सजग हुनुपर्छ ।
– पेन्टीमा राख्ने कटन पनि पाईन्छ सरसफाईको लागि त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
-यौनांगको बारम्बार सरसफाई गर्नुपर्छ । विशेषगरी पिसाब गरिसकेपछि सफा पानीले पखालेर -योनी सुख्खा बनाउनुपर्छ । (ट्वाईलेट पेपर साथैमा राख्न सक्नुहुन्छ । )
-बारम्बार गर्भपतन गर्दा पाठेघरमा हुने संक्रमणका कारण पनि यस्तो समस्या देखिन सक्छ । त्यसैले सचेत होऔँ । गर्भनिरोध चक्कीहरु, क्रिम तथा अन्य गर्भनिरोधक साधन सकेसम्म जानीबुझी चिकित्सकको परामर्शमा प्रयोग गरौँ ।
-मधुमेह तथा अन्य रोगले पनि यस्तो समस्या निकाल्न सक्छ । यसबारेमा पनि सचेत होऔँ ।
-धेरै चिल्लो, मसालेदार, जंक फूड तथा धेरै व्रत बस्नाले पनि यस्तो समस्या हुनसक्छ ।
-आजभोलीका यूवापुस्ता देखासिखीमा रमाउने हुँदा गलत गरिकाले वा पोर्न भिडियोमा देखिएको जस्तो आसनमा मनलाग्दि तरीकाले शारीरिक सम्बन्ध राख्छन् । यो पनि गलत हो । यसो गर्दा यौनांगमा चोट लाग्न सक्छ । र सेतो पानी बग्न सक्छ । यसमा पनि ध्यान पुर्याउँछनुपर्छ ।
भान्छाका यी औषधी एकपटक प्रयोग गरिहेर्ने कि ?
– भात पाक्दापाक्दैको ‘माड’ मा एक चिम्टी नुन मिसाएर पिउँदा निकै फाईदा हुन्छ ।
-बिरेनुन थोरै राखेर चौलानी पानी पनि राम्रो मानिन्छ ।
-चार चम्चा धनिँयाको दाना लिनुहोस् ।सफा चिसो पानीमा भिजाउनुहोस् र भोलिपल्ट बिहान त्यसलाई सफा भाँडोमा छान्नुहोस् । अनि खाली पेटमा पिउनुहोस् ।
-अमला पाउडरमा एक चम्चा मह मिसाएर दिनमा दुई पटक पानीको साथमा सेवन गर्दा पनि फाईदा हुन्छ ।
-बगैचामा अम्बाको पात छ ? त्यसलाई टिपेर सफा पानीले धोएर उमाल्ने र पानी पीउने ।
-जेठी मधुको धुलो मनतातो पानीमा घोलेर बिहान बेलुका सेवन गर्ने ।
– मेथीको दानालाई पिँनेर बनाएको पाउडर दिनहुँ बिहान बेलुका सेवन गर्ने ।
चिकित्सक भन्छन्, माथिका उपाइहरु अवलम्बन गर्दापनि तपाईलाई तर, समस्या जटिल नै भइसकेको छ भने चिकित्सककहाँ जाँच गर्न गइहाल्नुपर्छ ।
-यौनांग कहिल्यै साबूनको प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
-फोहोर पानीले धुनुहुँदैन । भिजाएको वा चिसो पारिरहनुहुँदैन ।
– मनतातो पानीले डिटोल राखेर पनि सफा गर्न सकिन्छ ।
-यौन सम्पर्कमा सहभागि भएपछि यौनांग राम्रारी सफा गर्नुपर्छ ।
तर तपाईलाई यस्तो समस्या बारम्बार देखियो वा जटिल छ भने चिकित्सकसँग सल्लाह गरी उपचार विधि खोज्नुपर्छ । रोग लागी उपचार गर्नुभन्दा रोगै लाग्न नदिन सचेत हाऔँ । यो सन्देश आफ्ना दिदीबहिनी साथीसँगीलाई पनि बाँडौ । तपाईको स्वास्थ्यलाभको कामना ।
यो टिप्सहरु पढ्नुभएको थियो ?
यी टिप्सहरु पढ्नुभएको थियो ?
–किन दुख्छ कम्मर ? यस्तो छ उपचार विधि
–पटक–पटक हाच्छ्युँ आउनुको यस्तो रहेछ कारण
हाँस्ने शैलीबाटै थाहा हुन्छ मान्छेको स्वभाव, तपाइँ कस्तो हाँस्नुहुन्छ ?
शारीरिक सम्बन्धको विषयमा महिलाहरुले सोच्छन् यी १० अनौठा
विवाहित महिलाप्रति पुरुष आकर्षित हुनुको कारण यस्तो !
यस्ता व्यक्तिहरुले पटक्कै पैसा बचाउँन